12ttnnaing blogspot.com: Q AND OVER 18 - READINGS
Q and A Over 18-Readings (73)
1. ဆရာမကြီးခင်ဗျာ ကျွန်တော်သိချင်တာလေးရှိလို့
2. ဆရာကြီးခင်ဗျ။ မေးချင်လွန်းအားကြီးလို့
3. OG နှင့်ပြသော်လည်းသိပ်မထူးပါ။
4. သမီးအသက်က နှစ်ဆယ်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့လက
5. ဆေးစစ်ကြည့်တော့ ဘီပိုးတွေ့ပါတယ်။
6. မိန်းမကိုယ်က လေထွက်တာကိုပါ။
7. ကလေးကို ထိခိုက်မှာစိုးပါတယ်။
8. ဆရာ တိုက်ရိုက်ညွန်ကြားတာလေးကို သိချင်လို့ပါ။
9. အပျိုဘဝကတည်းက ရာသီလာတာ မမှန်တတ်ပါဘူး။
10. အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကလေးယူတာမရသေးလို့
11. သားလေးရဲ့ဝှေးစေ့အတံလေးက ထိပ်ကပိတ်နေပါတယ်။
12. တစ်ကြိမ်လဲမဟုတ် နှစ်ကြိမ်ဆိုတော့ အရမ်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။
13. သုက်ရည် အပျစ်အကျဲက အားနည်းတာနဲ့ဆိုင်လားတဲ့။
14. သုက်ပိုး လုံးဝမရှိလို့ ဘယ်လိုဆေးတွေ သောက်ရမလဲဆရာ။
15. ပျော်တော်ဆက်က ကောင်မလေးနဲ့
Wed, Sep 19, 2012 at 10:07 AM
ဆရာမကြီးခင်ဗျာ ကျွန်တော် သိချင်တာလေးရှိလို့ မရှက်မကြောက်ပဲ မေးပါရစေခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က အိမ်ထောင် မကျသေးတဲ့ လူပျိုတစ်ယောက်ပါ။ ရည်းစားတောင် မထားဖူးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အသက်ကတော့ ၂၅ နှစ် ရှိပါပြီ။ တစ်နေ့ကို (သုတ်ရည်) နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ထွက်ရင် ကောင်းသလား။ လူကို ဒုက္ခပေးနိုင်သလား ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ အခြား ယောက်ကျားလေးတွေရော ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်သလားဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဒီလိုကိုယ့်ဖာသာကို ဖြေတတ်လို့ပါ။ အကယ်၍ လူကိုအန္ထရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုရင် ရှောင်လို့ရအောင်လို့ပါ။ ဆရာမရဲ့ အကြံပေးအဖြေကို စောင့်နေပါ့မယ်။
ကျွန်တော့် အီးမေးလ် ဘယ်ကနေရသလဲ မသိပါ။ ကျွန်တော့်မှာ ဘလော့ခ် တွေရော ဝက်ဘ်ဆိုက်ပါ ရှိတယ်။ ကျွန်တော့် Profile မှာ ဓါတ်ပုံနဲ့အတူ အမှန်အတိုင်း အားလုံးတင်ထားတယ်။ ဆရာမ မဟုတ်ပါခင်ဗျား။ Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း) ပို့လိုက်ပါတယ်။
Wed, Sep 19, 2012 at 10:50 AM
ဆရာကြီးခင်ဗျ။ မေးချင်လွန်းအားကြီးလို့ ဂျာနယ်ထဲက အီးမေလ်းနဲ့ ဝက်ဆိုက်ကို တွေ့တာနဲ့ ဆရာ/ဆရာ မခွဲခြားပြီး မသိလိုက်တဲ့အတွက် ဆရာကို လေးလေးနက်နက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ထမင်းစားရင် ဝတယ် ညဘက် ထမင်းစားရင် ဝတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ကျွန်တော် ညဘက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ထမင်းစားဖြစ်တယ်။ နောက် စားသလောက်လည်း ဝမလာဘူး။ အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာရယ် ခေါင်းလျှော်တိုင်း ဆံပင် တအားကျွတ်ကျွတ်နေတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆံပင်ကမရှိတော့ဘူး။ နည်းလမ်းလေးများရှိရင် ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဆရာ့ကို အထီး-အမလွဲတာ ခင်ဗျားက နံပတ် (၇) လောက်မှာရှိတယ်။ ရီရ-ပြုံးရတာပေါ့ဗျာ။ အဲ့့ ဆရာကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ ဒါလဲ ငယ်ချင်လို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆရာဝန်လောကမှာ အထူးကုကိုသာ "ကြီး" ထည့်တယ်။ ထမင်းစားတာနဲ့ ရုပ်ရှင်တွဲတာကနေ လူကို ဝ-မဝ ဆက်စပ်မှု မရှိပါ။
1. Hair Loss ဆံပင် ကျွတ်ရင်
2. Hair Loss in Women Treatments ဆံပင်ကျွတ်တာ ဘာနဲ့ကုမလဲ
Wed, Sep 19, 2012 at 11:56 AM
ကျွန်တော်က နံပါတ် (၇) နေရာမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲမသိလို့ တစ်ဆိတ်လောက် ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒီလိုဗျ။ အဲလိုဘဲ ဆရာ့ကို အမျိုးသမီးထင်တဲ့သူ အရင်က ၆ ယောက်လောက်ရှိမှာကို ပြောတာပါ။ တချို့က ဆရာမတဲ့။ တချို့က ဆရာ/ဆရာမလို့ ရေးမေးတယ်။ တချို့ကလဲ Sir/Madam လို့မေးတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အုပ်စုတခုထဲကလို့ ထင်ကြတာလဲနေမယ်။ အမှန်က ကိုယ်ပိုင် (ဆိုက်) ကနေသာ တယောက်တည်း ရေးပါတယ်။ တခြား (ဆိုက် ) တွေမှာပါရင် သူတို့က ကူးယူ ဖေါ်ပြတာသာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်းလို့ ရေးပေးတာက နည်းနည်းလေးပါ။ ပြည်တွင်းကနေ တောင်းတာ မှတ်မိသလောက် တခါတည်းရှိတယ်။
Mon, Sep 17, 2012 at 12:51 PM
OG နှင့်ပြသော်လည်း သိပ်မထူးပါ။ အနာတခြားဆေးတခြားဟု ထင်ပါသည်။ ဆေးမှာ ORNIDAZOLE TABLETS 500 MG ကို တနေ့ ၂ ကြိမ်သောက်ခိုင်းပါသည်။ မသက်သာပါ။ ခဏခဏပြရတော့ ရှက်လာပါသည်။ ဘာဆေး သောက်ရမည်ကို ပြောပေးစေချင်ပါသည်။ သားအိမ်ထဲသို့ ဆေးထည့်သော်လည်း မသက်သာပါ။ အခု ဖြစ်နေသည်မှာ မွေးလမ်းကြောင်းမှ ခပ်ပြစ်ပြစ် အဝါရောင်ဖန့်ဖန့်လို၊ အဖြူလိုလိုများအနဲငယ်ဆင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက် အင်္ဂါတခုလုံး ယားယံလို့ လာပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း တနေ့လုံးနီးပါး ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ရုံးတက်ရသောကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါသည်။ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုလည်း ရှိပါရက်နှင့် အခုလိုဖြစ်နေရပါသည်။
ဆေးနာမည်က Primolut N (norethisterone) ဖြစ်မလား၊ စစ်ကြည့်ပါ။ ဆရာပြောတာ ဟုတ်ရင်
- Endometriosis သားအိမ်ရောဂါ၊
- Menstrual disorders ရာသီလာရင်နာတာ၊ များတာ၊ မမှန်တာ၊
- Delaying menstrual bleeding နောက်ကျတာတွေအတွက်သုံးပါတယ်။
CURE U ဆိုတာက ဆေးရာင်းတဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီး တခြားနိုင်ငံကြီးတွေမှာ မရှိတတ်လို့ ဘာလဲ အတိအကျ မသိသေးပါ။ ဆေးနာမည် ပါမှာပါ။ ဖတ်ပြီးပြောပါ။ မွေးလမ်း (လိင်လမ်း) ရောဂါက ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆရာဝန်ကို သေခြာပြောပြပါ။
သမီးမှာ သားအိမ်ထဲတွင် အရည်အိတ်ရှိပါသည်။ OG နှင့်ပြပြီး ဆေးကူသမှု ခံယူနေပါသည်။ အသက်မှာ ၃၁ နှစ်ထဲတွင် ရှိပါသည်။ PRIMOULTE - M5mg ကို တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ခဲ့ရပါသည်။ အခုအခါမှာ ပျောက်လုနီးပါးရှိနေပါပြီ။ အဓိက အကြောင်းမှာ vigina ယားယံခြင်းပဲဖြစ်သည်၊ အရင်က မိသားစုဆရာဝန်နှင့် ပြခဲ့ပါသည်။ CURE U ဆေးပေးခဲ့ကာ အမျိုးသားပါ သောက်စေခဲ့ပါသည်။ အဝါရောင်ရှိအရည်များ အနဲငယ်ဆင်းလာတာနှင့်အမျှ ယားယံခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ခြင်းကြောင့်ဟု ပြောပါသည်။ အမျိုးသားသည်လည်း တခြားဘာမှ အရှပ်အရှင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဆေးသောက်တုန်း ပျောက်သွားသော်လည်း ခဏခဏပြန်ဖြစ်တတ်ပါသည်ရှင့်။ ထူးခြားချက်မှာ အမျိုးသားဧ။် sperm များ သားအိမ်ထဲသို့ မရောက်ရှိပါက အဲဒီလိုမဖြစ်ဟုထင်ပါသည်။ သားသမီးရဖို့လည်း ကြိုးစားနေတုန်းဖြစ်၍ မည့်သို့ ဖြစ်နိုင်သည်နှင့် မည်သည့်ဆေးဝါးများ သုံးစွဲရမည်ကို သိလိုပါသည်ရှင့်။
Vaginitis မွေးလမ်း-ရောဂါ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/vaginitis.html
Vulvovaginitis အမျိုးသမီးအင်္ဂါ ရောင်ခြင်းကိုဖတ်ပါ။
Wed, Sep 19, 2012 at 6:20 PM
သမီးအသက်က နှစ်ဆယ်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့လက သမီးချစ်သူနဲ့ အတူနေခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းကလဲ နေခဲ့ပါတယ်။ အရင်အခါတွေက ezee2ကိုသုံးခဲ့တာ အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ် ဒီတစ်ခေါက်မှာ ဖြစ်ပြီးခါစ တစ်လုံးသောက်ပြီး နောက်ရက် ညနေမှာ ကျန်တစ်လုံး ပျောက်သွားတာနဲ့ နောက်တစ်ကဒ် ထပ်ဝယ်ပြီး နှစ်လုံးစလုံး စိတ်ချရအောင်သောက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလ ရာသီ မလာလို့ ဆီးစစ်ကြည့်တာ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
ဘယ်ဆေးနည်းမဆို ၁ဝဝ% ဆိုတာမရှိပါ။ ဘာကြောင့်ဆိုတာ အမျိုးမျိုးတွက်ရမယ်။ အတိအကျတော့ မပြောနိုင်ပါ။ တခြား မေးစရာ၊ စစ်စရာတွေလုပ်မှ ဖြစ်နိုင်တာကို သိရမယ်။ အရေးပေါ်တားဆေးကို ခဏခဏ မသုံးသင့်တဲ့အကြောင်း ရေးထားပါတယ်။
Tue, Sep 18, 2012 at 11:22 AM
အိမ်ထောင်ကျတာတော့ ၅ လ ရှိပါပြီ။ အမျိုးသမီးကိုတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားပါတယ်။ 2011 ခုနှစ် ၅ လပိုင်းမှာ ကျွှန်တော် ဆေးစစ်ကြည့်တော့ ဘီပိုးတွေ့ပါတယ်။ အခု မိဘများက ဆေးကုပေးမယ် ရန်ကုန်မှာလို့ပြောပါတယ်။ (1) ပိုးကောင်ရေးစစ်ပြီး၊ (2) ရလာတဲ့အဖြေစာရွက်ကို အသဲအထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီး ဆေးသောက်၊ ဆေးထိုးရမယ် ပြောပါတယ်။ ဆရာရဲ့ ဆေးခန်းစာမျက်နှာမှာ ဖတ်ထားတော့ လက်ရှိ ဆေးသုံးမျိုးရှိတာကို သိထားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အထူးကုဆရာဝန်က ဘာဆေးသောက်/ထိုးသည်ဖြစ်စေ (1) အဲဒီလိုဆေးသောက်/ဆေးထိုး လုပ်ရင် ပျောက်ပါသလားခင်ဗျာ။ (ဘီပိုး ပျောက်တဲ့ဆေး မထွက်လာသေးဘူး။ ပိုးကောင်ရေ နည်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ဖတ်ထားဘူးလို့ပါ။) (2) အဲဒီလို ဆေးထိုး/ဆေးသောက်လုပ်ရင် မပျောက်ကင်းခဲ့သော် ရောဂါပိုးမွှားအခြေအနေက ပိုဆိုးလာပါသလား။ (3) ဒါပြီး အဲဒီ့ ဆေး (3) မျိုးရဲ့ One Course အတွက် (အဲ တစ်နှစ်တာ ပတ်လည် သောက်ရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်) ဘယ်လောက် ကုန်ကျနိုင်သလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဘီပိုးအကြောင်းတွေ ဖတ်ပြီးပြီထင်ပါတယ်။ ဘီပိုးကို သုတေသနတွေမပြတ်လုပ်နေကြတယ်။ ပိုသိလာသလို ပိုကောင်းတဲ့ ကုသနည်းတွေလဲ ရှိလာတယ်။ အားမငယ်ပါနဲ့။ တယောက်နဲ့ တယောက်တော့ မတူပါ။ ဆေးကုန်ကျစရိတ်တော့ မသိပါ။ ပိုးရှိနေတာ၊ များတာထက် အသဲကောင်းနေဘို့က အဓိကဖြစ်တယ်။ အသဲကိုသက်ရောက်မှာတွေ ဆင်ခြင်ပါ။ လူနေမှုပုံစံပါ ပြင်ရတယ်။ (ကွန်ဒွန်) သုံးပါ။ ဆေးမပြတ်စစ်ဆေးနေပါ။ ဆေးမှတ်တမ်းတွေ သိမ်းဆီးထားပါ။ အသဲ အထူးကုဆရာဝန်နဲ့သာ ပြသပါ။
Thu, Sep 13, 2012 at 3:07 PM
သမီး အသက်၂၉ နှစ်။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ၂ နှစ်ခွဲအရွယ် ကလေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သမီးမေးချင်တာက မိန်းမကိုယ်က လေထွက်တာကိုပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေး မမွေးခင်ကတည်းက ထွက်တတ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း လိင်ဆက်ဆံတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့။ ကလေးမွေးတော့လည်း ခွဲမေးခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီး တခြားရောဂါတွေလည်း မရှိပါဘူး။ အဲဒါ လေမထွက်အောင် ဘယ်လို နေထိုင် လေ့ကျင့်ရမလဲ ပြောပြပေးပါဆရာ။
လေက ဘယ်လိုနေရင်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ထွက်ပါသလဲ။ RVF အစာဟောင်းလမ်းနဲ့ မွေးလမ်းကြား ပြွန်လမ်း ဖြစ်နေရင်ထွက်နိုင်တယ်။ တချို့မှာ တခါတလေ ဆက်ဆံချိန်မှာ အရည်များရာကနေ၊ အနေအထားကြောင့်လဲ ထွက်တယ်။
ဆက်ဆံတဲ့ အချိန်ထွက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အောက်ပိုင်းကို အားပြုပြီး အိပ်ယာကနေ ထလိုက်တဲ့အခါ ညှစ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် အိမ်မှာနေရင် ဖြစ်တာများပါတယ်။ စိတ်နဲ့ထိန်းပြီး ညှစ်ထား ကြည့်ပေမယ့်လည်း အကျင့်မရသေးလို့လားမသိ အဆင်မပြေပါဘူး။ တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ ၇ ခါ ၈ ခါလောက် ထွက်တတ်ပါတယ်။ အသံနည်းနည်းလည်း ကျယ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ အစာဟောင်းလမ်း ဆက်နေတဲ့ ပြွန်လမ်းလေးဖြစ်နေတာ ဖြစ်နိုင်တတ်။ ကျယ်ရင် ဝမ်းပါ ထွက်လာနိုင်တယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတယ်။ ပျောက်ပါတယ်။ OG ကိုပြပါ။ မှောက်လျှက်နေရင် မထွက်ဘူး။ ပက်လက်ဆိုထွက်တယ်။ လိုသေးရင်လဲ မေးပါ။
ခွဲစိတ်ပြုပြင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာကိုပါလဲ။ နောက်ပြီး အကြီးစားခွဲစိတ်မှုပါလား။ အခု သာမီးအခြေအနေက စိုးရိမ်ရပါသလား။ မခွဲစိတ်ပဲ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ရင်ရော ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါလား။ ပိုပြီး တဖြည်းဖြည်း ကျယ်လာနိုင်ပါသလား။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးလို့ ရပါသလား။ ခွဲစိတ်မှုတွေကိုဆိုရင် ကြောက်လို့ပါ။
ဆရာထင်တဲ့ VVF ခေါ်တာ ဟုတ်-မဟုတ် အရင်စစ်ရမယ်။ ဟုတ်ရင်တော့ ခွဲရမယ်။ ခွဲစိတ်မှုအကြီးစားလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ မစိုးရိမ်ရပါ။ OG ကိုပြပြီး ရောဂါနာမည်ကို ပြန်ပြောပါ။
Mon, Sep 17, 2012 at 1:37 PM
သမီးအသက် ၂၄ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်သက် ၆ လရှိပါပြီ။ သမီး ဓမ္မတာလာမဲ့ရက်ကျော်သွားလို့ ဆီးစစ်ကြည့်တော့ positive ပြတယ်ဆရာ။ သမီးတနေ့ကတင် ဆံပင်ဖြောင့်လိုက်မိတယ်ဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်း မသိဘဲနဲ့။ အမျိုးသားက Beer နေ့တိုင်း သောက်တယ်။ ဆေးလိပ်လဲ အရမ်းသောက်တယ်။ ကလေးကို ထိခိုက်မှာစိုးပါတယ်။ သမီးကလေးကို ယူသင့် မယူသင့် ဆုံးဖြတ်ရခက်နေပါတယ်။ နောက်တခုက ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်လောက်က သမီးမှာ ဆီးကျင်တဲ့ရောဂါဖြစ်လို့ norbatin ၅ ရက်လောက် သောက်ထားတယ်။ ဒီလက ကိုယ်ဝန်ရှိစေမယ့် အမှားတခုခုမှလည်း မလုပ်ထားတော့ သမီးကိုယ်ဝန်လား သားအိမ်မှာရောဂါ တခုခုကြောင့်လား သေချာသိချင်ပါတယ်။ တချက်တချက် ဆီးစပ်ကနဲနဲစစ်စစ်စစ်စစ် ဖြစ်တယ်။ အဖြူလဲဆင်းပါတယ်။ အနံလည်းနံတယ်။
Sun, Sep 16, 2012 at 11:41 AM
သမီး ဒီနေ့ penorit (Norethisterone Acetate + Ethinyloestardiol) နဲ့ CYTOTEC 200mcg ဆေးတွေ ဝယ်လာပါတယ်။ ဘယ်ဆေးကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ ညွှန်ပေးပါနော်။ ဆရာပေးထားတဲ့ attach တွေကို ကြည့်ထားပေမဲ့ ဆရာတိုက်ရိုက်ညွန်ကြားတာလေးကို သိချင်လို့ပါ။ သမီးက မနက်ဆို ရုံး ၈ နာရီခွဲ ညနေ ၅ နာရီ တတ်ရပါတယ်။ ဆေးသုံးစွဲနေစဉ် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာလေးပါ ညွန်ပေးပါရှင်။ attach တွေမှာ Pregnancy Category X မှာ ဆိုရင် လုံးဝမသုံးရဘူးဆိုတဲ့ စာသားလေး သမီးနားမလည်လို့ပါ။
ဆရာပြောထားသလို အဝေးကနေ ဆေးကုတာ မသင့်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ကိုလဲ အဝေးကနေရော အနီးမှာပါ တမင်တကာ ဖျက်မပေးပါ။
သမီး ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ အကူညီပေးတဲ့ ဆရာ့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု သမီးကိုယ်ဝန်ကို သမီးမွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ အဒေါ်ကနေတဆင့် မွေးစားအမေ၊ အဖေတို့ ကူညီပေးမှုကြောင့် မင်္ဂလာရက်ကို အရှေ့ ရွှေ့လိုက်ပါပြီ။ သမီးလည်း စိတ်သောကရောက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ မနေ့က ဆေးတွေကိုလည်း လုံးဝမသုံးတော့ပါဘူး။ ဆရာ့ကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဆရာလဲ ဝမ်းသာတယ်။ နောက်ထပ် မေးချင်တာရှိလဲ အားမနာနဲ့။
Tue, Sep 18, 2012 at 8:12 PM
အိမ်ထောင်သက် ၆ လ ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အမျိုးသမီးက အပျိုဘဝကတည်းက ရာသီလာတာ မမှန်တတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်လလောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ရာသီလာရက် များမှာလဲ စောလာလိုက် နောက်ကျလိုက် နှင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ March လ ၂ဝ၁၂ မှာ အိမ်ထောင်ကျပါတယ်။ March လမှာ ရာသီပုံမှန် လာပါတယ်။ Apirl မှာ မလာပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ ဆီးစစ်ကြည့်တော့လဲ မရှိပါဘူး။ Mayလမှာ ရာသီပြန်လာပါတယ်။ June လမှာ မလာပြန်ပါဘူး။ ဆီးစစ်ကြည့်တော့လဲ ကိုယ်ဝန်မရှိပါဘူး။ July လမှ စြ့ပီးရာသီ ပြန်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် July လ ၅ ရက်နေ့မှာ ရာသီလာပါတယ်။ July လ ၂ဝ ရက်နေ့မှာလဲ နောက်တစ်ခေါက် ရာသီလာပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ August လထဲမှာလည်း တစ်လတည်း ၂ ကြိမ်ရာသီလာပါတယ်။ ၂-၈-၂ဝ၁၂ မှာ တစ်ကြိမ် ၁၆-၈-၂ဝ၁၂ မှာ တစ်ကြိမ်လာပါတယ်။ ၃၁-၈-၂ဝ၁၂ မှာ တစ်ကြိမ် ခု Sept လမှာလဲ ၁၇-၉-၂ဝ၁၂ မှာ ရာသီပြန်လာနေပါတယ်။ ရာသီလာရက်တိုင်းမှာလဲ ပုံမှန်တိုင်း ၅ ရက် လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ဗိုက်အောင့်တာ နာတာ ကျင်တာတွေလဲ မဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ခု (့) မှာ နေကြတာပါ။ အမျိုးသမီးအတွက် စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြဖို့ လိုအပ်ပါသလား၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဘာဆေးတွေ သုံးသင့်လဲ ဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီးကတည်းက ကွန်ဒုံးကို အသုံး ပြုတာပါ ဘာဆေးမှ မသုံးခဲ့ပါဘူး။ အမျိုးသမီးရဲ့ အသက်က ၂၆ နစ်ပါ။
1. Menstruation (1) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၁)
2. Menstruation (2) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၂)
Mon, Sep 17, 2012 at 8:26 PM
အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကလေးယူတာမရသေးလို့ အမျိုးသမီးက ဆေးဖြတ်ထားတာ ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဆေးခန်းတွေလည်း သွားပြတာ မထူးခြားပါဘူး။ သုတ်ပိုးလည်း ၁ ကြိမ်ထည့်ဘူးပါတယ်။ မထူးခြားပါ။ အဲဒါ ဆေးနည်းကောင်းများရှိရင် ကူညီစေချင်ပါတယ်။
1. Infertility (1) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/infertility-1.html
2. Infertility (2) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/infertility-2.html
3. Infertility and Fallopian Tube Procedures သားအိမ်ပြွန်ကျဉ်းလို့ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးခြင်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/fallopian-tube-procedures-for.html
4. Infertility and TB (1) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/infertility-and-tb.html
5. Infertility and TB (2) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/tb-and-infertility.html
6. Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/infertility-treatments.html
7. Infertility Treatments (2) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/infertility-treatments-2.html တွေကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖတ်မရရင် တိုက်ရိုက် အီးမေးလ် နဲ့မေးရင် ပို့ပေးပါမယ်။
Wed, Sep 19, 2012 at 8:12 PM
သမီးအသက် ၂ ၅နှစ်ပါ။ ကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သားလေးရဲ့ဝှေးစေ့အတံလေးက ထိပ်ကပိတ်နေပါတယ်။ ဆီးသွားစရာအပေါက်ပဲပါတယ်။ ဆရာဝန်ကပြောတာ ထိပ်ကလေးကိုဖြတ်ရမယ်တဲ့။ အခုကလေးက ၁ဝ လသားလေးပဲ ရှိသေးတာဆိုကော့ မလုပ်ချင်သေးလို့ပါ။
Phimosis ခေါ်တယ်။ အဖြစ်များတယ်။ ဆီးသွားနိုင်ရင်၊ ဆီးသွားချိန်မှာ မငိုရင် ကလေးကြီးတဲ့အထိ နေနိုင်တယ်။ ကြာကြာနေရင် အထဲမှာ အဘစ်အကြေး၊ အဆီခဲဖြစ်တာသာရှိတယ်။ မစိုးရိမ်ရပါ။ ခွဲတာကလဲ အသေးစားခွဲစိတ်မှုသာ့ဖစ်တယ်။
Phimosis and Circumcision ပန်းအဖျား လှီးဖြတ်ပေးခြင်း
Mon, Sep 17, 2012 at 3:00 PM
သမီးအသက်က (၂၃) ပြည့်ပါပြီ။ ရန်ကုန်ကပါ။ သမီးအသက် (၂၀) မှာအိမ်ထောင်ကျပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်လအကြာမှာ ကလေးယူပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ ဝမ်းသာလို့မဆုံးခင် သွေးစတွေ နည်းနည်းဆင်းပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ နယ်ကဆရာဝန်မထံမှာ သွားပြတော့ ဆရာမက ကိုယ်ဝန်ခိုင်ဆေး ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါစိုးရိမ်လို့ ရန်ကုန်တက်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်က နားနားနေနေနေခိုင်းပြီး ကိုယ်ဝန်ခိုင်ဆေး ထပ်ထိုးပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ နယ်မှာတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှာကို ပုံမှန်လုပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လေးလကြာတော့ ရန်ကုန်တက်ပြီး အာထရာစောင်း ရိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သမီးကလေးက ဦးခေါင်းပျော့နေပြီး spinal bifida ဖြစ်မှန်းသိပြီး ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဖောလစ်အက်ဆစ် ချို့တဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၈ လမှာ ကလေး ဗိုက်ထဲမှာ ဆုံးသွားပါတယ်။ ဆေးရုံကြီးမှာ ရိုးရိုးမွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကစပြီး ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ၈ လအကြာမှာ ကလေး ထပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ပြီး ဆေးခန်း တစ်ပတ်တစ်ခါ ပြပါတယ်။ ၅ ပတ်ကစပြီး ဆရာဝန်ဧ။် ညွန်ကြားချက်နဲ့ အာထရာဆောင်း စပြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ၉ ပတ်မြောက်မှာ ကလေးနှလုံးခုန်သံ မကြားရတော့ပါ။ သားအိမ်ထဲထိ ရှင်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်။ သမီး ကလေးအရမ်းလိုချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာပါလဲ။ တစ်ကြိမ်လဲမဟုတ် နှစ်ကြိမ်ဆိုတော့ အရမ်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ အာထရာဆောင်းရိုက်လို့လို့ တချို့ လူတွေကပြောကြပါတယ်။ တချို့ကလဲ ဖောလစ်အက်စစ်များလို့လို့ ပြေကြပါတယ်။ သမီးအခုကလေးယူတာ အခု ကိုယ်ဝန် (၆) ပတ် ထပ်ရှိနေပါပြီ။ အရင်လိုတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် အကြံဥာဏ်တွေ ပေးပါအုန်း။
နောင်တသဘော မရစေချင်ပါ။ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်ဆိုတာ (ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ) ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရား လေးပါထဲက ကံကြောင့်လို့ပြောရင် မငြင်းနိုင်ပါ။
ဖေါလစ်အက်စစ်တခုတည်းကြောင့်တော့ အဲဒါမျိုးမဖြစ်စေပါ။ အကြောင်းခံထဲမှာတော့ ပါတယ်။ ဖေါလစ်အက်စစ် တခါမှ မသောက်ဘူးဘဲ ကလေးအကောင်းတွေမွေးကြတာ အများကြီးပါ။ (အာလ်ထွာဆောင်း) ကြောင့်လဲ မဟုတ်ပါ။ သူ့ထက်ဆိုးတဲ့ ဓါတ်မှန်ကြောင့်ဆိုလဲ အဲလောက်အထိ မဖြစ်ပါ။
မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်ဆိုတာ မျိုးဗီဇမှာ ချို့ယွင်းတာဖြစ်တယ်။ ဒါကိုတားလို့မရဘူး။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ကတည်းက သိရင် ဖျက်ချကြတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ မွေးရာဇဝင်မကောင်းဘူးဆိုတာရှိတယ်။ (ဆောရီး) တခါမကောင်းတာဖြစ်ရင် ထပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ယေဘုယျသာဖြစ်လို့ စိတ်အားမငယ်စေချင်ပါ။ ဆရာ့ဆီမှာ Spina bifida ကလေးတယောက်မွေးပြီးနောက် ကလေးအကောင်း ၃ ယောက်ရှိပြီ မွေးထားတာ။
ကံကြောင့်ဖြစ်တာတွေမှာ ဘာသာတရားကိုလဲ အားကိုးကြရတယ်။ (ဘယ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်လဲတော့ မသိပါ။) စိတ်ဓါတ်လဲ ခိုင်ကြည်ရမယ်။ ဒီတခါ အားတင်းလိုက်ပါ။ ယုံကြည်စိတ်ခိုင်ခိုင်မာမာ ထားပါ။
Mon, Sep 17, 2012 at 8:55 PM
သူငယ်ချင်း တယောက်က အကူအညီတောင်းနေတယ်။ မေးပေးပါတဲ့။ သုက်ရည် အပျစ်အကျဲက အားနည်းတာနဲ့ဆိုင်လားတဲ့။ ကလေးရမရနဲ့ရော ဆိုင်လားတဲ့။ နောက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ထိုးဆေး တမျိုးလောက် လိုချင်ပါတယ်တဲ့။ ၀ယ်လို့ရော ရနိုင်ပါသလား။
Wed, Sep 19, 2012 at 12:14 AM
သုက်ပိုး လုံးဝမရှိလို့ ဘယ်လိုဆေးတွေ သောက်ရမလဲဆရာ။ ကျွန်တော်က နယ်မှာနေတော့ ရန်ကုန်ကဆရာဝန်တွေနဲ့လဲ ပြသပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မထူးခြားပါဘူး။ ကျွန်တော် မိန်းမကိုလဲ စစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူမှာ ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ ကျွန်တော်မှာ ပြဿနာတက်နေတယ်။ သုတ်ပိုးစစ်တာ ၅ ကြိမ်ရှိပါပြီ။ ၁ ကောင်မှ မတွေ့ပါ။
Thu, Sep 20, 2012 at 9:46 AM
ကျွန်တော် တစ်ရက်က ပျော်တော်ဆက်က ကောင်မလေးနဲ့ တစ်ညဘာမှမပါဘဲ အတူတူအိပ်မီပါတယ်။ နှစ်ပက်လောက်က ဆေးစစ်ကြည့်တော့ အိုကေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကကြောက်နေတယ်။ စိတ်ထဲမှာလဲမသန့်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြူပြီးကူညီပါ။
HIV အတွက် စာတွေ အများကြီးရေးထားပါတယ်။ တပုဒ်ပို့လိုက်တယ်။
Thu, Sep 20, 2012 at 10:46 AM
အင်္ဂါအရေပြားယားတာက ပျောက်ပြီဆရာ။ ကွမ်စားဆေးရွက်ကြီးနဲ့ အင်္ဂါကိုအုံလိုက်တာ ပျေက်သွားတယ်။ ဘယ်အချိန်လောက် ဆေးပြန်စစ်ရင်ကောင်းမလဲဆရာ။
STDs လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဂနို၊ ဆစ်ဖလစ်၊ HIV အပြင်လဲ ရှိသေးတယ်။ ဆေးစစ်တာလဲ တခုနဲ့တခု မတူပါ။ စာတွေ အများကြီးရေးထားတာ မာတိကာကနေရွေးဖတ်ပါ။ အပေါ်ယံအနာပျောက်ပေမဲ့ ပိုးမသေတာဖြစ်တတ်တယ်။ ပိုးသေဆေး သောက်ကိုသောက်ရမယ်။
STDs and Condom (ကွန်ဒွမ်) သုံးပေမဲ့ ကူးနိုင်တဲ့ရောဂါတွေ http://dts-medicaleducation-adultblogspotin/2012/04/stds-and-condomhtml
STDs (1) လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ (၁) http://dts-medicaleducation-adultblogspotin/2012/04/sexually-transmitted-diseases-stdshtml
STDs (2) လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ (၂) http://dts-medicaleducation-adultblogspotin/2012/06/stds-2html
STDs (3) လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ (၃) http://dts-medicaleducation-adultblogspotin/2012/06/stds-3html
STDs (4) လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ ဆေးညွှန်း http://dts-medicaleducation-adultblogspotin/2012/03/stdsstis-general-recommendationshtml
STDs (5) လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ အခြေခံ http://dts-medicaleducation-adultblogspotin/2012/03/1_30html
Syphilis Treatment (ဆစ်ဖလစ်) အတွက်ဆေးများ http://dts-medicaleducation-adultblogspotin/2012/03/syphilis-treatmenthtml
Posted by ကောင်းကင်ပြာ at 08:48